Home Wararka Beesha Mariixaan oo la heshiisay Axmad Maboobe & Farmaajo albaabada ka soo...
Beesha Mariixaan oo la heshiisay Axmad Maboobe & Farmaajo albaabada ka soo xirmeen
Waxaa shalay ka dhacay magalaada Nairobi ee dalka Kenya kulan taariikhi ah oo in mudo ah laga soo shaqeeynayay. Kulankaan ayaa waxa uu dhexmaray waxgaradka, ganacsata iyo siyaasiyiinta beesha Mariixaan iyo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland, Axmad Maxamed Islam. Kulanka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaan shaqsiyaad ay ehel hoose yihiin Farmaajo kuwaas oo ka soo quustay Farmaajo iyo hogaankiisa.
Xiiriirka u dhaxeeyay Maamulka Jubbaland iyo Beesha Mariixaan ayaa ah mid aan wanaagsanayan, gaar ahaan sanadihii u danbeeyay. Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday, Farmaajo ayaa waxa uu in mudo ah ka shaqeeynay in uu kala fogeeyo Axmad Madoobe iyo Beesha Mariixaan ee uu isagu ka dhashay.
Madaxweyne Axmad Madoobe ayaa in mudo ah dhankiisa isku dayaayay in uu dib u heshiisiin la sameeyo waxgaradka beesha Mariixaan oo khaladaad badan ka tirsanaayay hogaankiisa. Dhanka kale Beesha Mariixaan ay iyadana doonaysay in ay soo afjaraan khilaafka kala dhaxeeya Madaxda Jubbaland.
Kulankii shalay ka dhacay magaalada Nairobi ayaa ahaa mid albabada ka soo xiray qorshii Farmaajo ee uu ku doonaayay in uu ku kala qaybiyo beelaha walaalaha ee isla degan Jubbaland. Sida MOL loo xaqiijiyay Farmaajo ayaa waxa ku dhaxay walwal iyo naxdin uu ka qabo shirkii shalay ka dhaxay magaalada Nairobi iyo saameynta uu ku yeelan doono hogaankiisa gabaabsiga ah.
Beesha Mariixaan oo ay u muqato in Farmaajo hawada ka sii baxaya, amaba uusan lahaynin fursdad uu dib loogu soo doorto ayaan doonaynin in ay cadaawad iyo dagaal siyaasadeed la galaan kooxaha uu Farmaajo ku xumeeyey magaca beesha Mariixaan.
Waxaa loo balamay in kulan kala ay labada dhinac isugu yimaadaan lana dardar galiyo xal u helida khlaafkii keenay in labada dhinac ay kala fogaadaan. Madaxweyne Axmad Madoobe ayaa dhankiisa balan qaaday in u uu diyaar u yahay, sixina doona qalaladaadka ay beesha ka sheeganayso hogaankiisa.